Inona no planeta Afaka milaza mialoha ny fitiavana Destiny
Last nohavaozina: Jan. 06 2018 | 3 min namaky
Amin'ny fanandroana, misy zavatra antsoina hoe Natal tabilao. Izany ankapobeny ny Snapshot ny toerana marina ao amin'ny Zodiaka rehetra ny planeta hafa eny amin'ny lanitra sy ny vatana dia amin'izao fotoana izao ny teraka avy amin'ny toerana nahaterahanao. Toy ny sarintany, nametraka avy ny toetra sy ny mampiseho izay tianao / mila amin'ny lafiny samihafa amin'ny fiainanao. Samy mahafantatra ny tsirairay fa ny planeta Venus dia ny fitiavana, ary ny famantarana dia ny any amin'ny tany nahaterahanao afaka manome antsika hahatakatra ny zavatra ilainao ao amin'ny fitiavana. Inona no ny Venus momba anao? (Raha toa ka mila ny Venus hahita famantarana, kitiho eto).
Venus ao Aries: Mila olona izay afaka hanakana anao mahaliana, na ianao handroso haingana. Tokony mitovy ny fitiavany, ary ho feno hafanam-po eo amin'ny fiainana. Afaka manintona ny maro mety suitors, fa ianareo eo amin 'izy ireo haingana ianao raha tsy mifantoka amin'ny izay tianao. Tsy maintsy mahazo ny mafy lasa mila marika foana fa fihetseham-po vaovao.
Venus ao Taurus: Mila olona miovaova sy ny tompon'andraikitra. Raha ry zareo bibidia sy hafahafa ny, Nihazakazaka ianao ny fomba hafa. Tianao ny olona iray izay babo anareo kely amin'ny mpanao an-idina zavatra eo amin'ny fiainana, ary ny olona izay araka ny nofo ihany no mitovy ny toetra. Maka ny fotoana ianao rehefa mifidy ny mpiara-miasa, ary hangataka fanoloran-tena tanteraka. Mitady izay possessive loatra na saro-piaro.
Venus ao Gemini: Mila tairina ara-tsaina mihoatra noho ny hafa rehetra. Raha toa ka tsy afaka ny hanana fitondran-tena tsara amin'ny olona, ianao hirenireny. Mila olona iray izay mahaliana, ny karazana ara-tsaina, fa izay mafy orina kokoa noho ianao izy ireo ka afaka mampitony anao sy ny corral anao. Afaka mandeha ny olona iray tanora kokoa noho ianao, na izay miasa tanora noho izy ireo.
Venus amin'ny Cancer: Mila fifandraisana-po amin'ny olona iray hafa mihoatra noho izay rehetra. Tianao ny mpiara-miasa, izay no mbola holazainy aminao-pihetseham-po, manohana sy mamporisika anareo, fa hanosika anao koa ivelan'ny izay hainao. Fifandraisana afaka vendrana raha tsy haka vintana amin'ny namanao rehetra matetika. Diniho ireo fironana ho anao mba ho ray aman-dreny eo amin'ny fifandraisana.
Venus ao Leo: Tokony ho ny kintana eo amin'ny fifandraisana, ka te ho mpiara-miasa izay hanome anao ny tsara sy hidera ilainao. Afaka ny ho feno fitiavan-tena kely indraindray ny fitiavana, fa ianareo no mafana sy ny mpankafy ihany koa, ary mahagaga fa tsy mivadika. Tianao ny fitiavana ho toy ny zavatra avy amin'ny toerana tena olon-tiany na ny horonantsary tantara, ary tena tantaram-pitiavana.
Venus ao Virgo: Mila olona iray izay azo ampiharina sy ny tompon'andraikitra, ary iza no hilaza aminao hitondra ny fotoana. Tsy te-maika rehefa mifidy olona ho amin'ny, ary te-mba ho azo antoka fa marina aloha. Afaka ny ho saro-kenatra kely amin'ny fitiavana, ary mety mila azy ireo hanao ny dingana voalohany. Mila ny mpiara-miasa, izay afaka hampitony ny hozatra rehefa manahy momba ny fifandraisana.
Venus ao Libra: Mila olona izay mandray fanoloran-tena ho zava-dehibe, satria azo antoka atao. Mandritra izany fotoana izany, mila manana habetsahan'ny toerana sasany ao amin'ny fifandraisana mba hitombo, ary te olona mahafantatra fa mety foana ny fifandraisana hihatsara. Ankasitrahanao olon-tiany ary herim-po, ary te-ho raisina ho fanajana sy ho toy ny mitovy.
Venus ao Scorpio: Mila olona iray izay mpankafy, nefa afaka handamina ny hamafin'ny, satria mety ho mavesatra ihany indraindray ny fitiavana. Afaka smother na hifikitra any amin'ilay namanao, manao zavatra na milalao mifehy azy ireo, ka zava-dehibe ho anao ny hiasa amin'io talohan'ny amin'ny olona iray ianao, na hanosika azy. Ianao nahasarika ny olona mahery izay toa matanjaka.
Venus ao Sagittarius: Mila olona izay no sahisahy, fahasahiana, ary afaka hiara-mihomehy anao. Tsy mandray ny fitiavana ho zava-dehibe loatra, noho izany dia mila olona izay azo ampiharina kokoa ny fitiavana, ka tsy ho be loatra ianao mania. Mila ny fifandraisana amin'ny olona ara-batana, ka mila ny mahatsiaro-po dia zava-dehibe iray koa. Io toerana io dia afaka maneho ny mari-pahaizana licence mandrakizay / bachelorette.
Venus ao Capricorn: Mila olona matotra, tompon'andraikitra, ary kely nentim-paharazana ny fitiavana. Ianao nahasarika ny olona izay mahomby, efa tratra na dia teny an-dalana ho any fanatrarana ny toerana avo eo amin'ny fiainana, ary afaka mandeha ho mpiara-miasa be taona. Koa satria ianao ka nentim-paharazana, ianao afaka mampiasa olona izay hitondra ny sasany zava-manitra toy izany koa ny fifandraisana tsy mahazo stale.
Venus ao Aquarius: Mila olona izay no ny olona, manana toetra miavaka, ary mifanitsy amin'ny tsaina anao. Ianao toy ny hoe minamana ny olona voalohany, ary hahatsapa fa fisakaizana no fototry ny fitiavana tonga lafatra. Ny olana dia, afaka manana fotoana sarotra mandeha mihoatra noho namana, noho izany dia mila olona hanokatra anareo-pihetseham-po, ary hitondra ny fitiavana.
Venus ao Pisces: Mila olona mahafantatra ny fihetseham-pon'ny, dia hiaro anao rehefa mahatsapa ho malemy, ary tsy vola aman-karena ianao,. Manao na inona na inona ianao noho ny olona iray tianao, ary fitaovana mora azo noho izany. Ny hoe tantaram-pitiavana toy izany am-po, mila olona azo ampiharina bebe kokoa sy mafy orina. Ianao tia zavakanto karazana.